त्रिशूलीमा खसेको बसमा भेटिएका यी नाबालक को हुन् ? – Saurahaonline.com
त्रिशूलीमा खसेको बसमा भेटिएका यी नाबालक को हुन् ?
चितवन, मंसिर १३ । पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत चितवनको चुम्लिङमा यात्रु बस र ट्रक ठोक्किदा भएको दुर्घटनामा सातजना यात्रुको ज्यान गएको छ ।
मृतकमध्ये देवदह नगरपालिका वडा नम्बर १० रूपन्देहीका दिपक पाण्डेको मात्रै परिचय खुलेको छ । दुर्घटनामा मृत्यु भएका सबैको शव पोष्टमार्टमका लागि भरतपुर अस्पताल ल्याउने तयारी भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख सन्तोष पन्तले जानकारी दिए ।
सचिवका दाजु बेपत्ता
त्यसैगरी बाँकेकी ४० वर्षीय उमा पोखरेल, अर्घाखाँचीका ३१ वर्षीय राजेन्द्र रायमाझी, अर्घाखाँचीका ४२ वर्षीय माधव खनाल र नाम नखुलेका करिब ५-६ महिनाका बालक रहेका छन् । सबैको भरतपुरको पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ ।